AL-QUDS - NuuralHudaa
West Bank keessatti mormiin gaggeeffame: Itti aanaan prezdaantii Ameerikaa Maayik Peens Imala gara Isra’eelitti Arba’a har’aatiif karoorfatee ture yeroo biraatti kan dabarse tahuullee, lammileen Falasxiin karoora daaw’annaa kana hordofuun, mormii “guyyaa dallansuu” jechuun yaaman gaggeessaa oolan. Mormii Buufata keellaa Qalandiyaa kan magaalota Alquds fi Ramallah jiddutti geggeessaniin loltoota Isra’eeliitiin walitti bu’aniiru.
§ Magaalaa Naabluus keessatti halkan kaleessaa loltoonniIsra’eel dhukaasa bananiin, daa’imti takka rukutan. Kiibxata halkan West Baank keessatti namoota 29 kan hidhan akka ta’eefi Alquds keessatti ammoo hogaantoota paartii Fatah dabalatee namoonni heddu hidhamaniiru.
§ Prezdaant Abbaas Gara Riyaad Imale: prezdaantiin Falasxiin Mahmuud Abbaas Arba’aa har’aa gara Riyaad kan imale yootahu, Malika Salmaan fi Dhaaltu Gonfoo Muhammad Bin Salmaan waliin dhimma Alquds irratti ni mari’atu. Abbaas Jum’aa dhuftus gara Fransaay imaluun Makroon waliin nimari’ata. Gamtaan Awurooppaa Falasxiiniif beekkamtii guutuu akka kennuuf Faransaay deeggarsa akka gootu kan gaafatu tahuulleen beekkameera.
§ Qondaaltoonni Falasxiin ol’aanoo gara Mookoo fi Beenjiingitti imalan. kayyoon imala Isaanii Chaayinaa fi Ruusiyaan marii kana booda Isra’eel waliin godhamu akka hoogganan gaafachuuf akka ta’e gabaasni arganne ni mul’isa.kan booda Senior Palestinian officials have also been dispatched to Moscow and Beijing in an effort to find a new international sponsor for negotiations.
§ UN Ajjeechaan Ibraahim Abusuraayaa akka qoratamu gaafate. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti Komishiinarrii mirga dhala namooma, Zayid Ra’ad al-Huseen, ajjeechaan Aktivistii Falasxiin Ibraahim Abusuraayaa qaama walaba ta’een akka qoratamu gaafate. Abusuraayaan bara 2008 haleellaa Isra’eel Gaazaa irratti raawwatteen miila isaa lamaanu kan dhabe yoo tahu,torban dabre ammoo labsii Traamp mormaa yeroo turetti, rasaasa biiflee Isara’eliitiin mataa keessa rukutamuun wareegame. Komishiinar Zayid ” Abusuraayaa haala kamiinu loltoota Isra’eel irratti nama balaa dhaqqabsiisu hinturre,ajjeechaa isaatiif Isra’eel sababa tokko kennuu hin dandeettu” jedhe.
§ Dhaabbanni Bilusummaa Falasxiin-PLO’n UN keessatti miseensummaa guutuu gaafachuuf: murtii manni maree nageenyaa mootummoota gamtoomanii, labsii Traamp mormuun guututti dabarse Ameerikaan mirga addaa (Veto power) isiitti fayyadamuun eega kuffistee booda, dhaabbanni bilisummaa Falasxiin-PLO’n walgahii Ramallah kessatti gaggeesseen,kana booda dhimma nageenyaa irratti hariiroo Ameerikaa waliin qabu kan addaan kutu akka ta’eefi UN keessattis miseensummaa guutuu kan gaafatu tahuu beeksise. PLO’n bara 2011 miseensummaa guutuu gaafatee kan hin milkaayin tahuun ni yaadatama.
§ Ameerikaan wixinee manni marii nageenya mootummoota gamtoomanii sagale 14’n murteesse, mirga addaa (Veto Power)tti fayyadamuun kuffiste. wixineen biyyoota miseensa mana marichaa 15 keessaa 14 deeggarame sun Labsii Traamp Alquds irratti dabarse fudhatama kan dhabsiisu ture.
Mormii Biyyoota adda addaa keessatti godhamaa oole: Biyyoota addunyaa heddu keessatti labsii Ameerikaan Al-Qudsi ilaalchiftee baafte balaaleffatuun mormiin gaggeeffamaa oole.
Murannoo Erdoogaan: Erdogaan Murtii Ameerikaa Fudhatama dhabsiisuuf Turkiyaan kan hojjattu ta’uu beeksise. Prezdaantiin Turkiyaa ummata kutaa Anaatooliyaa magaalaa Konyaa keessatti murtii Ameerikaa mormuun baheeef haasawa gama Teleconfaransiitiin godheen “Mootummoota gamtoomanitti, biyyoonni miseensa mana maree nageenyaa ta’an labsii Ameerikaa fudhatama akka dhabsiisan Turkiyaan ni gaafatti, kunis yoo milkaahuu dhabe, kora waliigala mootummoota gamtoomanii irrattis ni dhiheessina” jechuun dubbate.
Walitti Bu’iinsa Falasxiinotaafi Waraana Israa’eel: Waraanni Isra’elii fi Lammiileen Falasxiin walitti bu’an. Loltoonni Isra’eel lammiilee Falasxiin jum’aa hardhaa mormii gaggeessaa turan irratti dhukaasuun namoota sadi ajjeessan. Namoonni ajjeefaman kunniin tokko magaalaa Gaazaa keessatti yoo tahu, namoonni lama ammoo West Baank keessatti ajjeefaman. Labsii Traamp kan Al-Qudsi/Jerusalem “magaalaa guddoo Isra’eel” jedhu hordofuun, lammilee Falasxiin kumaatamaan lakkaawaman dabalatee biyyoota addunyaa heddu keessatti guyyaa hardhaa mormiin cimaan gaggeefameera.
Himannaa Iiraan: Ameerikaan xiyyeeffannaa ummatni addunyaa dhimma Al-Qudsi irratti godhaa jiru jijjiiruuf yaala jirti jechuun Iiraan yakkite. Mootummoota Gamtoomaniitti Ambasadariin Ameerikaa, Iiraan waliigaltee Niwukilarii cabsuu isii ragaa hin haalamne qabna jechuun guyyaa kaleessa himatte. Kanuma hordofuun Jum’aa hardhaa Mootummoota Gamtoomanitti Ambaasaddarri Iiraan deebisaa kenneen, Ameerikaan xiyyeeffannaa ummatni addunyaa dhimma Al-Qudsi irratti godhaa jiru jijjiiruuf yaala jirti jedhe.
Ibsa Gamtaa Awrooppaa: Isra’eel dachii Falasxiin kan humnaan qabatte irratti ijaarsa seeraan alaa kan itti fufte tahuu Gamtaan Awurooppaa beeksise. Ijaarsi seeraan alaa Isra’eel E1 jettee moggafte, kutaleen Weest baank fi Al-Qudsi akka addaan muramanitti kan karoorfame akka ta’e gabaasni gamtaa Awrooppaa kun ni ibsa. Isra’eel gandoota lammilee Falasxiin diiguu akka itti fufteefi Qubattoota Yahuudotaatiif ammoo daandii gurguddaa fi manneen jireenyaa bal’inaan kan ijaaraa jirtu tahuu gabaasichi ibseera. Daandii Ijaaramaa jiru kun magaalota Falasxiin lamaan; Ramaalaah fi Beeytalaham kan walqunnamsiisu tahus, magaalaa Al-Qudsi irraa dabsuudhaan kan ijaaraamaa jiru tahus gabaasni guyyaa hardhaa bahe ni mul’isa. Akka gabaasa kanaatti naannawa Al-Qudsi/jerusalem qofatti Isra’eel dachii humnaan qabatte irratti lammiilee isii 208,000 ol ta’an qubsiiftee jirti.
Ameerikaan Imbaasii isii biyyoota jaha keessa jiraniif akeekkachiisa baafte: Imbaasiiwwan Ameerikaa biyyoota jaha kessatti argamaniif akkeekachiifni kan kenname yoo tahu, biyoonni jahan mormiin Imbaasii Ameerikaa duratti juma’aa hardhaa ni gaggeefama jedhame, Kabul-Afgaanistaan, Kuwalalampuur-Maleezhiyaa, Tookiyoo-Jaapaan, Waarsoo-Poland, Budapest-Hangaarii fi Qonsilaa Ameerikaa Nepils-Xaaliyaaniiti.
Qondaaltonni Japaan Imbaasii Ameerikaa Tookiyoo keessatti argamuuf akeekkachiisa erganiin, mormiin namoota 300 ol hirmaachisu murtii Ameerikaan Al-qudsi/Jarusalem ilaalchisuun baafate balalefachuun Juma’aa hardhaa kan karoofame tahuu beeksisan.
Muummichi ministeera Maleezhiyaa duraanii Mahatiir Muhammad murtii Traamp balaalefachuun, mormii guyyaa hardhaa Maleezhiyaa magaalaa Kuwalalampur keessatti gaggeefame irratti haasawa godhe. Dr Mahatiir Muhammad yeroo ammaa manguddoo wagga 93ti.
Buufatni daangaa gaazaa tii fi Isra’eel jidduu jiru baname: Isra’eel Buufataalee daangaa Gaazaa fi Isra’eel jidduu jiru Khamiisa dheengaddaa cuftee turte. Guyyaa hardhaa buufataalee lamaanuu kan bante tahuu miidiyaaleen Isra’eel gabaasan.
Hamaas labsii Traamp Alqudsi ilalchisee baase, lammiileen Falasxiin hadheeffatanii akka morman guyyaa hardhaatis waamicha godhe.
Gamtaan Biyyoota Islaamaa dhimma Al-Qudsi ilaalchisee walgahii Ariifachiisaa magaalaa Istaanbul keessatti geggeessaa jiruun “Al-Qudsi magaalaa guddoo Falasxiin” jechuun mormii tokko malee labse.
Walgahii kana irratti Sa’udii fi biyyoonni Arabaa michuu isii tahan dipilomaatota sadarkaa gad aanaatiin waan hirmaataniif, walii galteen akkana cimaa ta’e irra hin gayan yaadni jedhu akka tureefi, haata’u malee biyyoonni miseensa gamtichaa waldhabdee isaan jidduu jiru moggatti dhiisuudhaan, dhimma Al-Qudsi irratti waliigaltee akkanaa irra gahuun isaanii labsii Traamp fudhatama kan dhabsiisu akka tahe gabaafameera.
Wixinee labsii kanaan biyyoonni idil-addunyaatis Magaalaan Al-Qudsi magaalaa guddoo Falasxiin tahuu beekkamtii akka kennaniif waamicha kan dabarse akka tahee fi labsii Donaald Traamp haala cimaa ta’een balaaleffateera.
Gamtaan biyyoota Islaamaa (OIC) biyyoota 57 miseensummaan kan hammate tahuun ni beekkama.
Gamtaan biyyoota Islaamaa dhimma Al-quds irratti walgahii Ariifachiisaa jalqabe
Walgahii ariifachiisaa Gamtaan biyyoota Islaamaa guyyaa har’aa magaalaa Istanbul keessatti jalqabame kana Turkiyaan kan yaamte yoo tahu, labsii Traamp magaalaan Alqudsi/Jerusalem “magaalaa guddoo Isra’eel” jechuun labse balaaleffatuun akka ta’e gabaasni arganne ni mul’isa.
Prezdaantiin Turkiyaa Rajab Xayyib Erdogan walgahii kana irratti haasawa baniinsaa godheen; “Alqudsi muslimoota Addunyaatiif sarara diimaa Ameerikaa fi Isra’eel darban. Falasxiin biyya Isra’eel humnaan qabatte ta’uu beekkamtii guutuu biyyoonni addunyaa akka kennan nuti biyyoonni miseensa Gamtaa Islaamaa cimsinee hojjachuu qabna. Biyyoonni addunyaatis Falasxiin magaalaa guddoo isii Alqudsi/jerusalem waliin beekkamtii kennuu qabu” jedhe.
Prezdaantiin Falasxiin Mahmuud Abbaas gama isaatiin,murtii Traamp kana addunyaan guutuun kan hin fudhatin tahuu ibse.
Prezdaant Abbas haasawa isaa keessatti”Murtiin Traamp seera addunyaa kan cabse waan ta’eef, biyyoonni Idil-addunya seera cabe kana caldhisanii ilaaluu hin qaban, Ameerikaan magaalaa Alqudsi akka meeshaa dhuunfaa isiitti mootummaa Zaayonotaatiif kennaa kennite.Kana booda Ameerikaan nagayaa buusti jennee isaan waliin hin mari’annu. Biyyi addunyaa kamiyyuu Imbaasii isaa gara Alqudsi deebisuu mirga hinqabu. Apartaayidiin Afrikaa Kibbaa keessatti xumuramus, ummanni Falasxiin garuu mootummaa Apaartayidii Isra’eel jalatti dararamaa jira” jechuun ibse.
Walgahii ariifachiisaa kana irratti biyyoonni muslimaa 57 kan hirmaataa jiran yoo tahu, hoggantoonni akka Malika Jordan Abdallah Bin Huseen, Amiira Qaxar Sheekh Tamiim Bin Hammaad Al-Sanii, Prezdaantii Indoneezhiyaa Joko Widodo dabalatee kanneen birootis kan hirmaataa jiran tahuun beekkameera.
Dardara ganna 16 Waraana 20’n
Haleellaa Xayyaara Israa’eliin gaazaa irratti Raawwatameen, Falasxiinonni lama Ajjeefaman.
Haleellaan kun dargaggoota Falasxiin 2 kan Motorsaaykilaan deemaa turan irratti, Kaaba Gaazaa Magaalaa Beyt Lahyaa keessatti akka raawwatame. Mootummaan Israa’el Ammoo gocha kana an hin raawwanne jedhee haale.
Raashiyaa fi Turkiyaan, Murteen Traamp nagaya booressuu malee faaydaa hin qabu jedhan
Preezidaantiin Raashiyaa Vlaadmir Putin, daaw’annaa isaa biyyoota baha jiddu galeessaatti godhaa jirun, Suuriyaa, Masrii fi Turkiyaa keessa naannayee jira. Waraanni isaa kan Mootummaa Bashaar Al Asaad gargaaruuf Suuriyaa ture, waan barbaadamu ofirraa geessee waan jiruuf akka bahu jalqabu ajaja dabarsee gara Masr imale. Masrittis dhimmoota garagaraa irratti mari’atee gara Turkiyaa imale.
Turkitti, Preezidaant Erdogaan waliin wal arguun, dhimma nageenya naannichaa fi haala yeroo magaalaa Al Quds irratti ibsa kennanii jira. Ibsa magaalaa Ankaaraatti kenneen, “Raashiyaa fi Turkiyaan, murteen Traamp Al Quds magaalaa guddoo Israa’el akka taatu murteesse, doggogra akka ta’e ni amanu. Nageenya Baha jiddu galeessaatiifis faaydaa takkallee hin qabu. Naannicha jeequun, abdii nageenya balleessa” jedhe.
Erdogaanis, Raashiyaan dhimma ummata Falasxiin irratti ejjannoo jabaa qabaachuu isiitti gammaduu isaa eega ibseen booda, Arba’aa boruu ammoo biyyoonni islaamaa dhimma Al Quds irratti mari’achuuf magaalaa Istaanbulitti walgahii kan taa’an ta’uu beeksise.
Xiinxaltoonni Siyaasaa akka himanitti, Raashiyaan mucuca Ameerikaa kanatti fayyadamuun, michummaa biyyoota baha jiddu galeessaa waliin qabdu jabeessuu kaayyeeffattee jirti. Biyyoonni Arabaa fi Muslimaa hedduun isaanii murtee Ameerikaa kanatti waan dallananiif, Raashiyaanis kana fayyadamtee biyyoota baha jiddu galeessa of harkatti galfachuun humna isii jabeeffachuu barbaaddi.
Indooneeshiyaa: magaalaa Jaakaartaa keessattis hiriirtonni kuma 5 ta’an Alaabaa Falasxiin qabatanii, Imbaasii Ameerikaa duratti guyyaa lammaffaaf hiriira bahuun mormii Murtii Traamp irratti qaban ibsataniiru. Namoota Hiriira kana qindeessan keessaa Nuurjannaah Nurwaanii, “Haasofni hooggantoonni haasawan qofti nu hin quubsu. Dhaabbileen gurguddoon addunyaa dhiibbaa garagaraa gochuun Murtiin kun akka haqamu taasisuu qabu” jedhe.
Morookoo: Magaalaa Raabaat keessatti hiriirtonni dallansuu Murtii Traamp irratti qaban dhaggeeysisaniiru. Miseensooni mootummaa, dhaabbileen mormitootaa, warroonni Amantii leellisanii fi balaalleeffatanis, gamtaan dirretti bahuun mormii isaanii ibsaniiru.
Indiyaa: Kutaa Kaashimir keessatti ammoo jiraattoonni suuqaa fi mana isaanii cufuun karaa duwwaa godhanii mormii isaanii ibsatan. Yamanii fi Suuriyattis mormitoonni Murtii Traamp kan balaaleeffatan ta’uu beeksisan.
Paakistaan: magaalaa Kaaraachiittis, hiriirtonni gara Imbaasii Ameerikaa deemuun mormii isaanii ibsachuuf yaalanis, poolisiin kora bittanneessaa akka of duuba deebi’an godhee jira.
Update: Sa’aa 9:50 (3:50PM)
Lubnaanitti lamiileen Falasxiin Poolisootaan walitti bu’an
Lammiileen falasxiin murtee Tramp waa’ee Al Quds irratti dabarse hordofee, embaasii Ameerikaa Magaalaa Beeyruut keessatti argamu duratti mormii dhageessisuuf bahanii turan. Haa ta’u malee Poolisiin Lubnaan mormitoonni gara Imbaasichaa akka hin deemne karaa itti cufe. Kana booda walitti bu’iinsi uumamuu isaa Al jaziiraatu gabaase.
Mormitoonni kunniin Mootummaa Ameerikaa caalaa ammaan tana dursitoota Arabaatti quba qabuu jalqabaniiru. “Falasxiin dhiifama nuu godhi, karaa nutti cufan” jechuun dallansuu dursitoota Arabaa irratti qaban dhaadannoon ibsatan.
Eega Israa’el bara 1947 hundoofterraa kaasee, lammiileen falasxiin heddu gara Lubnaan baqatuun kaampiilee garagaraa 12 keessa jiraataa jiru. Haa ta’u malee hedduun isaanii abdii gara Falasxiin deebi’uudhaa waan dhabaniif gara Awurooppaa fi biyyoota biroo baqataniiru.
Waraanni Maaleezhiyaa gama hundaan qophaahee jira. Ajaja hoggansa ol aanaa eeggachutti jirra.
Ministeera ittisa Maaleezhiyaa, Hishaamuddiin Husseen
ALHADA: December 10 Akka Sa’aa Biyya keenyaatti Sa’aa 8:00 (2:00PM)
Lammiileen Maaleezhiyaa 10,000 ol tahan, impaasii Ameerikaa Kan magaalaa Jaakaartaa keessatti argamu duratti bahuudhaan, deeggarsa Fakasxiinotaaf qabaniifi mormii mootummaa Ameerikaatiif qaban ibsataa jiru. Mormitoonni Kumaatamaan lakkaawaman kunniin dhaadannoolee adda addaa qabatanii, “Imbaasii Ameerikaa Magaalaa Al Qudssatti hin hayyamnu, Bilisummaan Al-Qudsiifi Falasxiinotaaf” jechaa mormii isaanii ibsataniiru.
Murtee Traamp hordofee mormiin jalqabame guyyaa afraffaaf itti fufee jira. Lammiileen Falasxiin West Baank fi Gaazaa keessa jiraatan loltoota Israa’el wajjiin walitti bu’aniiru. Israa’elis guyyaa kaleessaa Gaazaa irraa rokkeetni natti dhukaafame jettee xayyaaraan Gaazaa haleelte. Loltootni Hamaas lamaa fi lammiileen nagayaa lamas haleellaa xayyaaraa kanaan ajjeefamaniiru. Hiriira mormii guutummaa Falasxiin keessatti godhamaa jiru kanaan haga ammaa namoonni 900 ta’an madaahuu isaanii dhaabbanni fannoo diimaa beeksisee jira. Guutuu Dubbisi…
Haleellaa Boombii Gaazaa irratti raawwatameen, lammiileen falasxiin hanga 2 ajjeefamanii, 20 ol ammoo madaayuun gabaafame.
Fincilli Falasxiinotaa ammas itti fufee jira. baay’inni namoota miidhamaniitis dachaan dabale.
Magaaloota Afghaanistaan hedduu keessaatis ummanni Muslimaa Jum’aa Har’aa labsii Traamp Al Quds magaalaa guddoo Isra’eeliiti jechuun labse mormuun hiriira bahe
Muslimoonni Indooneezhiyaa, Imbaasii Ameerikaa magaalaa guddoo Indooneezhiyaa keessatti argamu fulduraati labsii Traamp mormuun hiriira cimaa geggeessan
Walitti Bu’iinsa Waraana Israa’eliifi Lammiilee Falasxiin Jiddutti Uumameen, Namoonni Haga 4 Miidhaman.
Lammiileen Falasxiin Labsii Doonaald Traamp Momraa oolan. walitti bu’iinsa waraana israa’eliifi lammiilee falasxiin jiddutti uumameen, namoonni haga 4 miidhamaniiru.
Donaald Traamp Imbaasii Ameerikaa Telaaviiv irraa gara al-Qudsitti jijjiiruuf kan karoorfate tahuu, Prezdaant Mahmuud Abbasitti bilbilaan hime.
Donaald Traamp Imbaasii Ameerikaa Telaaviiv irraa gara al-Qudsitti jijjiiruuf kan karoorfate tahuu, Prezdaant Mahmuud Abbasitti bilbilaan kan hime tahuun gabaafame.
Prezdantiin Falasxiinis, gochi kun nageenya naanichaa fi nageenya addunyaatis booressa jechuun akeekkachiise.
Prezdaantiin Turkiyaa, Magaalaan Al-Quds sarara diimaa tuqamuu hin qabne jechuun akeekkachiise
Doonaal Traamp magaalaan Al-Qudsi magaalaa guddoo Israa’eeliiti jechuun labsuuf qophaayaa jiraachuun isaa ni beekama.
Biyyoota mormii cimaa dhageessisaa jiran keessaa Turkiyaan addaa duree yoo taatu, prezdaant Rajab Xayyib Erdogaan haasawa bakka bu’oota Paarlaamaatiif godheen “dhimmi Al-qudsi muslimoota addunyaatiif Sarara diimaa eennuyyuu hin tuqne” jechuun akeekkachiise.
Erdogaan itti dabaluudhaan, Ameerikaan karoora kana yoo kan hin dhiisne tahe, Turkiyaan walitti dhufeenyaa Israa’el waliin qabdu hunda kan addaan kuttu tahuu hime. Prezdaant Erdogaan haasawa isaa kanaan,Turkiyaan dhaabbata gamtaa biyyoota Islaamaa walgahii ariifachiisaa yaamuudhaan, dhimma Alquds irratti tarkaanfii cimaa tahe fudhachuuf kan qophaayaa jirtu tahuu beeksise.
Haaluma walfakkaatuun biyyoonni Awurooppaatis dhimma Al-Quds ilaalchisee karoora Ameerikaa qeeqaa kan jiran yoo tahu, Przdaantiin Faransaay Emanu’eel Maakroon, Dhimmi Alquds/Jerusalem murtaayuu kan qabu, waliigaltee Falasxiinii fi Israa’eel jiddutti godhamu qofaan tahuu akka qabu, bilbilaan Traampitti himuu isaa gabaasni arganne ni mul’isa.
Haaluma walfakkaatuun mootummaan Sa’udiis gama Imbaasii isaa Waashingitanitti argamuutiin, Ameerikaan karoora kana akka dhaabdu kan gaafate tahuun beekameera.
Bulchiinsi Falasxiin dhimmaa Al-Qudsi irraatti walgayiin ariifachiisaan akka waamamu gaafate.
Ministeerri haajaa alaa Falasxiin Riyaad Al-Malik, Dhaabbiileen Gamtaa Biyyoota Arabaa fi Gamtaan Biyyoota Islaamaa, dhimma Al-Qudsi irratti mari”achuuf walgahii hatattamaa akka yaaman kan gaafate tahuu gabaasni arganne ni mul’isa.
Mootummaan Falasxiin gaafii kana kan dhiheesse, eega Prezdaantiin Ameerikaa Donaald Traamp, “Al-Quds/Jerusalem magaalaa guddoo Isra’eeliiti”, labsii jedhu qopheessaa jiraachuun isaa beekamee booda hogguu tahu, Riyaad Al-Malik dhimma kanarratti hooggantoota Gamtaa biyyoota Arabaafi Gamtaa biyyoota islaamaa waliin bibilaan kan haasawe tahuunis beekameera. Bulchiinsi Falasxiin, Karoorri Donal Traamp kun mirga abbaa biyyummaa Ummata Falasxiin kan dhiibuu fi naannicha walitti bu’iinsa hamaa keessa kan seensisu akka ta’es akeekkachiiseera.
Haaluma walfakkaatuun Mootummaan Urduunis haala walgahiin Ariifachiisaan kun itti waamamu irratti, marii kan jalqabe akka tahe gabaasni Rooyitarsirraa arganne ni mul’isa.
Donaald Traamp yeroo duula nafiladhaa adeemsisaa turetti, Prezdaantii tahee yoon filame Imbaasii Ameerikaa Telaaviiv irraa gara magaalaa Al-quds/Jerusalem deebisa jechuun isaa ni yaadatama.